Jeep Grand Cherokee: ukubuyekezwa kanye izici
Jeep Grand Cherokee - American Suv, oluqanjwe Chrysler. ukukhiqizwa yayo iqale ngo-1992 futhi kusukela ngaleso sikhathi uye wakhulula 9 izinguqulo kulo mshini. Ake sicabangele isenzo esisodwa ngentuthuko yakamuva: Jeep Grand Cherokee 5.7 4 WD, okuyinto ikhiqizwa 2010 kuze kube namuhla ngesisekelo iMercedes-Benz ML imoto.
izici Technical we Jeep Grand Cherokee
Lena omkhulu evulekile-umnyango ezinhlanu imoto, eyenzelwe abagibeli abane kanye nomshayeli. Umshini ubude 482,2 cm, ukuphakama kusukela iphuzu phansi kuya phezulu umzimba isondo kuyinto 178,1 cm, ububanzi phakathi amaphuzu angaphandle we izibuko 194,3 cm. Imoto ngempela ezisindayo, kuba isisindo lomgwaqo we-1933 kg. Wendlovu umthamo - 457 amalitha nge izihlalo ezigoqwe 960 l nge yokubola. Imoto fuel ithangi ivolumu 93,5 amalitha, kuyilapho ibusa 10 amalitha uphethiloli uma ushayela emgwaqweni amakhilomitha 100, 21, 1 amalitha 100 ikhilomitha ngalinye lapho ushayela edolobheni futhi 14.1 ilitha umjikelezo kuhlanganiswe. Grand Cherokee ngesivinini kuya ku-100 km / h ngemizuzwana 8.7 nje. futhi ingafinyelela isivinini esiphezulu 224 km / h.
Jeep Grand Cherokee: ukubuyekezwa abanikazi
Phakathi abanikazi nale moto kunzima ukuthola umuntu ngizisole ukuthenga kwabo. Imoto yinhle kakhulu: stylish, enamandla, kodwa okwamanje ungalwi, ayimkhangi futhi imi yokupaka, futhi ngemoto emgwaqweni. Jeep akuyona zakudala off-roader, okungukuthi, phezu kwezihlabathi, izintaba morass ke kungenzeka, kudlule Nokho, naphezu kwalokhu umxhwele unqamule izwe Jeep Grand Cherokee. Izibuyekezo abanikazi uphawu lokuthi uhambo kahle neqhwa, futhi imigwaqo imvula yisiphepho. Ukusetshenziswa uphethiloli ngalesi imoto, kuye engela buka, kungaba plus kanye lokususa. Uma uyiqhathanisa iyiphi sedan umgibeli, Suv ukusetshenziswa olukhudlwana. Nokho, lapho kushintshwe isisindo bese uqhathanisa nabanye SUV, inani uphethiloli washisa kuyoba mncane impela.
Ukumiswa - enye plus Jeep Cherokee. Izibuyekezo abanikazi kubonisa ukuthi kahle "Swallows" zonke namabhampa imigodi emigwaqweni zendawo. Ukukhuthala ekuphatheni Good - imoto endleleni beqiniseka kakhulu ubambe ngisho iqhwa, usabela ngokushesha ukuze ukuqondisa, inikeza isisindo esihle kakhulu usayizi wesithombe sakho kanye maneuverability. Excellent soundproofing ingaphakathi - umshayeli akazange uhlupho yimuphi umsindo nezingahlobene nendaba. Omnivorous ehloniphekile kuyunithi ngomsindo ezinhle - enye inzuzo imoto Jeep Grand Cherokee. Izibuyekezo abanikazi abonisa ukuthi imoto Dynamics kakhulu. Washeshe bathinteka ukugeleza amarobhothi, ngokoqobo ondiza amaloli lapho kuyomfica. yenqwaba isiqu, okungaba, uma babefisa, wafaka 15 amasaka amazambane ukuthi ungakuphi travel egcwele, okuhlanganisa itende, izingubo, isikebhe, ukudla, imbiza nge-tripod, itende, izingubo zokulala nezinye izinto. Excellent umsebenzi heater emotweni Jeep Cherokee. Izibuyekezo abanikazi abonisa ukuthi umshini lufakwa kahle, ngisho yesithwathwa ezinzima, lapho izinga lokushisa emoyeni ingeqi degrees amathathu ngaphansi kwezingaqhwa.
Nokho, phezu Jeep Grand Cherokee kukhona Izibuyekezo ezingezinhle. Abanye abanikazi bathi imoto, naphezu lingakanani umxhwele ngaphandle, hhayi elikhulu kangaka ngaphakathi. Njengoba sekushiwo, ukusetshenziswa kukawoyela kuqhathaniswa ngezimoto kuleli banga intengo enkulu ngokwanele. Nokho, akugcinanga ngokwandisa petrol, kodwa futhi ukusetshenziswa lamafutha emotweni Jeep Grand Cherokee. Izibuyekezo wabanikazi futhi ubonise ibanga iDemo lapho ukulungisa eziqondisa - kunzima ukushayela imoto ngesandla esisodwa, kufanele njalo qinisa isondo. Ukuthembeka imoto kuphakamisa akukho ukuphikisa, kodwa uma kwehluleka kuyodingeka ukuthenga izingxenye ngezinto ezibizayo. Abanye abanikazi ukuthi umbono omuhle ithiye ububanzi phambi edeskini, ngaphezu yokuntuleka igilavu linezingxenye futhi isitoreji linezingxenye imininingwane edingekayo.
Sekukonke, lena, engibaziyo okuthembekile ezinhle, okuvumela umnikazi walo ukuba azethembe beshayela.
2002 Winter Olympic ngo-Salt Lake City: abahlanganyeli, abawinile
Aluminium skirting: Izinzuzo Izimpawu